Nepali Rashifal 2018 – नेपाली राशिफल २०१८ – Nepali Horoscope
Home » 2018 » Nepali Horoscope 2018
We, at AstroSage, are back with most authentic Nepali Rashifal for 2018. This Nepali horoscope is based on the scientific principles of Vedic Astrology. If you want to know how this year is going to be for you, if you want to avoid all the problems and pitfalls, and would like to tread the path of prosperity and progress, these predictions are for you. Check it out now:
राशिफल 2018 वैदिक ज्योतिषको अवधारणामा आधारित छ। यो वर्ष 2018 प्रत्येक राशिको लागि कस्तो फल लिएर आएको छ, हेरौं।
मेष राशिको लागि 2018 ले वर्षको शुरुवातमै ऊर्जा र संकल्प लिएर आउनेछ भन्ने भविष्यवाणी गर्दछ। विद्वतापूर्ण निर्णयहरूले वर्षैभरि तपाईंको लागि राम्रो समाचार ल्याउनेछन्। तपाईँलाई व्यस्त तालिका र खानको निरन्तरता नहुनाले सन्तुष्टि र घरमा आनन्दको कमी महसुस हुनाले दैनिक जीवनमा अराजकता आउन सक्छ। शुरूका दुई महिनाहरूमा स्वास्थ्य असजिलो रहन सक्छ। आयमा वृद्धि हुनेछ; तपाईं क्यारियर पनि माथि उठ्नेछ। लामो यात्रा फलदायी हुनेछन् र राम्रो परिणाम ल्याउनेछन्। अक्टोबरको मध्य पछि, आय केही कम हुन सक्छ र आय बढाउनको लागि मेहनत आवश्यक पर्नेछ। छोराछोरीको स्वास्थ्यमा केही उतार चढाव आउन सक्छ, वैवाहिक जीवनले तपाईंको बढी समय र प्रतिबद्धताको मांग गर्नेछ; र बिस्तारै तपाईं अरूको मन जित्न सक्षम हुनुहुनेछ। कामबाट नियमित रूपमा विरक्त हुने सम्भावना छ। समग्र रूपमा, तपाईंको लागि यो वर्ष एउटा राम्रो र प्रगतिशील वर्ष हुनेछ।
वर्षको शुरूआत मै तपाईंलाई आफ्ना केही आक्रामक व्यवहारले असर गर्न सक्छ, त्यसैले तपाईंको स्वास्थ्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। तपाईंले बिस्तारै केही हासिल गर्नको लागि शक्ति र इच्छा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले वर्षैभरि सफलता हासिल गर्नको लागि साँच्चै नै कठिन काम गर्न आवश्यक छ। काममा केही निराशा आउने पनि सम्भावना छ। अक्टोबर पछि, तपाईंको आयमा वृद्धि हुनेछ र वैवाहिक जीवनले पनि परम आनन्द पाउनेछ। 2018 को वृष राशिको राशिफल अनुसार, कुनै छोटो यात्राको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ; तपाईं तिर्थयात्राको लागि जान सक्नुहुन्छ। बच्चाहरुलाई फलिफाप हुनेछ र उनीहरूले राम्रो प्रदर्शन गर्नेछन्। तपाईंले विवाद र संघर्षबाट जोगिनु आवश्यक छ किनकि तिनीहरूबाट धन घाटा भएर तपाईंलाई समस्या आइपर्न सक्छ। शुरूका दुई महिनामा कुनै पनि विवाद वा घोटालाहरूबाट टाढा रहनुहोस् किनकि यसले तपाईंको छवि बिगार्न सक्छ। तर तपाईं जीवनमा चुनौतीहरूको सामना गर्न भने एकदमै छिटो हुनुहुन्छ। कुनै स्वास्थ्य समस्याको सम्भावना छ। तपाईंको वजन बढ्न सक्छ र यसैले आफ्नो खाना प्रति ध्यान दिनु आवश्यक पर्नेछ। तपाईंले आफ्नो जोडी र धार्मिक गतिविधिहरूमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। समग्र रूपमा यो एउटा मध्यम वर्ष हो जसमा तपाईंले धेरै नयाँ कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवन र वित्तीय स्थिति राम्रो हुनेछ।
कर्कट राशिफल 2018
कर्कट राशिको लागि 2018 को राशिफल अनुसार, तपाईंले आफ्नो वरिपरि थप ऊर्जा महसुस गर्नु हुनेछ र अरूलाई पनि नेतृत्व गर्ने इच्छा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंका केही प्रियजनले तपाईंको भावना बुझ्न सक्ने छैनन् र यो अमिलो सम्बन्धको एउटा कारण बन्न सक्छ। तपाईंको गृहस्थ जीवन केही नियमित समस्यासंग राम्रो हुनेछ। तपाईंको प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुहुनेछ र कामको प्रोफाइलमा पनि बृद्धि हुनेछ। तपाईंको सामाजिक स्तरमा पनि वृद्धि हुनेछ। कुनै दीर्घकालीन रोग बढ्ने संभावना छ जसको कारण तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रो ध्यान दिनु आवश्यक पर्नेछ। तपाईंले आफ्नो वैवाहिक जीवनमा आनन्दको कमी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई सुखी बनाउन तर्कहरूबाट जोगिनु आवश्यक छ। खर्च अत्यधिक हुनेछ। कमाई त हुनेछ, तर तपाईंले आफ्नो अत्यधिक खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ किनकि यसले तपाईंको आयमा असंतुलन सिर्जना गर्न सक्छ। विद्यार्थीहरूले राम्रो पढ्नेछन् र छोराछोरीले इच्छाशक्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। तपाईंले ठाँटको जीवन बिताउनु हुनेछ किनकि वर्षैभरी तपाईंको इरादा रमाइलो गर्नु र खर्च गर्नु हुनेछ। जसको लागि तपाईंले कठिन काम गर्नु हुनेछ। समग्र रूपमा केही चुनौतीहरूका साथै यो वर्ष तपाईंको लागि धेरै अनुकूल रहनेछ।
सिंह राशिको 2018 को ज्योतिष भविष्यवाणी अनुसार, तपाईंले धार्मिक र सद्गुणी कार्यमा चासो धेरै राख्नु हुनेछ; तिर्थयात्रामा पनि जान सक्नुहुन्छ। जनवरी-फरवरीमा भाइबहिनीहरूको स्वास्थ्यमा केही समस्या हुन सक्छ, तर तपाईंमा वीरताको वृद्धि हुनेछ। प्रेम जीवनमा मिश्रित अनुभवहरू प्राप्त हुनेछन्। एक पक्षबाट तपाईंले केही गलत अर्थको सामना गर्नु पर्नेछ, तर अर्को पक्षमा तपाईंसे आफ्नो प्रेमी या प्रेमिबाट प्रेमको ताजा हावाको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। तपाईंको कार्यले सफलताको बाटोमा तपाईंलाई नेतृत्व गर्नेछन्। तपाईंले तर आलस्य गर्नु हुँदैन। वैवाहिक जीवनको परम आनन्द पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्नो जीवन अगाडि जाँदैन गरेको र परिस्थितिहरू तपाईंको अनुरूप भएर आउँदै गरेको महसुस गर्नुहुन्छ र तपाईंको आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार आउनेछ। बच्चाहरुले अतिरिक्त प्रयास गर्नु पर्नेछ र तपाईंले तिनीहरूलाई हेरचाह गर्नु आवश्यक छ; र साथै तिनीहरूको प्रयासमा समर्थन गर्नु पर्नेछ। विदेश यात्राको संभावना धेरै देखिन्छ। गर्भवती महिलाले जनवरी-फरवरीमा विशेष हेरविचार गर्नुपर्छ। अक्टोबर महिनाको मध्य पछि, गृहस्थ जीवनका साथै व्यावसायिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन देख्नु हुनेछ। तपाईंले सामाजिक स्थितिमा पनि सुधार आउनेनेछ।
कन्या राशिको 2018 को राशिफल अनुसार, यो वर्ष तपाईंको लागि एउटा राम्रो फल दिने वर्ष हुन गईरहेको छ। धेरै राम्रा अवसरहरूले राम्रो वित्तीय परिणाम ल्याउने छ। तपाईंको सामाजिक वृत्त अत्यधिक सक्रिय हुनेछ र तपाईंको सामाजिक स्थितिमा पनि सुधार हुनेछ। साथीहरू र प्रियजनहरूसंग राम्ररी समय बित्नेछ। विद्यार्थीहरूले भने एकाग्रतामा कमीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तसर्थ, मेहनत नै सफलताको प्रमुख कारण हुन सक्छ। तपाईंले आफ्ना छोराछोरीको हेरचाह गर्नु आवश्यक छ किनभने केही स्वास्थ्यका समस्याहरू आउनेछन् र तिनीहरूलाई जलन महसुस हुनेछ। तपाईंले राम्रो व्यावसायिक जीवनको आनन्द प्राप्त गर्नु हुनेछ। तपाईंका वादाहरू पुग्नेछन्। लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको इच्छा पूरा हुनेछ। वर्षैभरि आय राम्रो हुनेछ। जनवरीमा केही अनपेक्षित लाभको संभावना छ। अक्टोबर पछि यो वृद्धि पनि अझ बढी हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो जोडीको माध्यमबाट लाभ हुन सक्छ, तर उनलाई अक्टोबरसम्म ऊर्जा कम महसुस हुन सक्छ वा स्वास्थ्यमा कुनै समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। तथापि, तपाईंले तिनीहरूबाट पूर्ण समर्थन प्राप्त गर्नु हुनेछ। तपाईंले केही आधिकारिक कार्यले वा टाढा काम भएकोले परिवारबाट टाढा जानु आवश्यक पर्नेछ। परिवारमा कुनै पवित्र समारोह हुनेछ। नयाँ सदस्य परिवारमा आउने पनि सम्भावना छ। समग्र रूपमा, यस वर्ष सबैतिरबाट तपाईंलाई बढि लाभदायक हुनेछ। तपाईंलाई गृहस्थ जीवनमा शान्ति कायम राख्नु र तर्कहरूबाट जोगिनु पर्छ।
तुला राशिको ज्योतिष 2018 पूर्वानुमान अनुसार वर्षको शुरुवात ऊर्जावान तरीकाले बित्नेछ, तर आक्रामक व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ, जसले गर्दा गृहस्थका साथै वैवाहिक जीवनको परम आनन्द उठाउने भविष्यवाणी गर्दछ। तपाईंको स्वास्थ्य जनवरी र मार्चको बीच कम हुन सक्छ। आफ्नो बोलीमा नियन्त्रण राख्नुहोस् किनभने तिनीहरूले अरूका भावनामा चोट लगाउन सक्छन्। काम गर्ने ठाउँ राम्रो स्थान हुनेछ जहाँ तपाईंले आफ्नो विचारलाई आकार दिन सक्नु हुनेछ र तपाईंले आफ्नो पक्षका कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ। आलस्यलाई भगाउनु पर्नेछ। सहकर्मीहरू एकदमै तटस्थ हुनेछन्। त्यसैले; तपाईंले आफ्नो सक्षमतामा निर्भर हुनुपर्छ। जनवरीदेखि मार्चसम्म आयमा वृद्धिका संभावनाहरू छन्। त्यसपछि, तपाईँले आफ्नै प्रयासमा नयाँ उद्यमको नेतृत्व गर्नु हुनेछ। तपाईंले आफ्नु गृहस्थ जीवनको लागि आवश्यक समय दिन सक्नुहुन्न त्यसैले तपाईंको गृहस्थ जीवनमा सन्तुष्टि र आनन्दको कमी हुनेछ। यसमा तपाईंले ध्यान दिनु आवश्यक पर्छ। कार्डमा कम यात्रा र लामो वा विदेश यात्राको पनि केही योग छ। बच्चाहरु राम्रा हुनेछन् र जीवनलाई रमाइलो बनाउनेछन्। विद्यार्थीहरूले मेहनत गरेर आफ्नो मेहनतका फलको स्वाद लिनेछन्। मार्च पछि वैवाहिक जीवन प्रगतिशील हुनेछ। समग्र रूपमा, यो वर्ष तपाईंको लागि एउटा प्रगतिशील वर्ष हो। तपाईंले आय पक्षको वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।
वृश्चिक राशिको 2018 को राशिफल अनुसार, यस वर्ष केही चुनौतीहरू आउनेछन् र तपाईं तिनीहरूको लागि तयार हुनुहुन्छ भने, तपाईंको लागि उपलब्धि हुनेछ। जनवरीदेखि मार्चसम्म तपाईंको स्वास्थ्यमा गिरावट आउन सक्छ; त्यसपछि तपाईंले यस्ता समस्याहरूबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ र बल प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईंले आफ्ना विरोधीहरूलाई जित्ने सक्नुहुन्छ। पैसाको कुरामा, वर्षभरि र विशेष गरी अक्टोबरसम्म तपाईंलाई वित्तीय समस्याले असर गर्न सक्छ किनकि त्यो समयमा अत्यधिक खर्च हुनेछ। अक्टोबर पछि, राम्रा परिणामहरू स्पष्ट रूपमा देखा पर्छन्। तपाईंले निवेश गर्नु अघि जाँच गर्नु आवश्यक छ। यो वर्ष तपाईंले आफ्नो कम्मर कसेर थप काम गर्न तयार हुनुपर्छ र मात्र राम्रो आय प्राप्त हुनेछ। शिक्षाको लागि विदेश जान रुचि राख्नेहरूको लागि यो वर्ष धेरै राम्रो छ। बच्चाहरुको जीवन आनन्दसंग बिताउनेछन् तर बदमास हुनेछन्, उनीहरूले एकाग्र हुनु पर्ने हुन्छ। वर्षको धेरैजसो समय गृहस्थ जीवनको अनुरूप हुनेछ। वैवाहिक जीवनले राम्रो परिणाम ल्याउनेछ। तपाईंका जोडीले तपाईले गरेका प्रयासहरूमा साहस र सहयोग दिनेछन्। कार्यस्थल एकदमै चुनौतीपूर्ण हुनेछ तर प्रगतिशील पनि हुनेछ। समग्रमा भन्नु हो भने यो वर्ष मिश्रित परिणाम दिने देखिन्छ।
धनु राशिको लागि 2018 को राशिफल अनुसार, यो वर्ष तपाईंलाई जीवनमा अझ अघि बढ्ने धेरै अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। यस वर्षलाई एउटा उत्तम वर्ष बनाउन तपाईंको संकल्पशक्ति पर्याप्त उच्च हुनेछ। मार्चसम्म आयमा वृद्धि हुनेछ। त्यसपछि मईसम्म तपाईंको खर्चमा वृद्धि हुनेछ, तर त्यसपछि तपाईंले फेरि वर्षको बाँकी समयमा केही सुधार ल्याउन सक्नु हुनेछ। त्यसैले, वित्तीय समस्या चिन्ता गर्ने कारण हुनेछैन। तपाईंले पैसा कमाउनतिर निकै ध्यान दिनु हुनेछ र एउटाभन्दा बढी स्रोतहरू मार्फत कमाउन सक्नुहुन्छ। शनिले तपाईंलाई मेहनत गर्न तयार गराउनेछ। तर, यसले तपाईंको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने हुनाले कर्मपिशाच नबन्नुहोस्। मार्चदेखि मईसम्म स्वास्थ्य ठीकै देखिन्छ तर अक्टोबर पछि भने स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सम्भव छन्। ड्राइभ गर्दा धेरै ध्यान दिनुहोस्। बच्चाहरु परिश्रमी हुनेछन् र विद्यार्थीहरूले धेरै राम्रो प्रदर्शन गर्नेछन्। गृहस्थ जीवन केही नियमित समस्याहरूलाई छोडेर राम्रो र आनन्दमय हुनेछ। तथापि, तपाईंले विरक्त हुनबाट वा गृहस्थ जीवनको असन्तुष्टिको भावनाबाट जोगिनु पर्छ र गलत शब्दहरू बोल्नु हुँदैन। वैवाहिक जीवनले राम्रो परिणाम प्रदान गर्नेछ, तर तपाईंका जोडीको स्वास्थ्यले भने तपाईंलाई धेरै कष्ट दिनेछ। प्रेम जीवनले बल पाउनेछ। विरोधीहरू माथि तपाईंको वर्चस्व भने रहनेछ। समग्र रूपमा, यो वर्ष तपाईंको लागि एउटा राम्रो वर्ष हुनेछ, स्वास्थ्यमाथि धेरै ध्यान राख्नु पर्ने हुन्छ।
यो 2018 तपाईंले आफ्नो जीवन के हो भनेर जान्न सक्षम हुन वर्ष हुनेछ। एकातिर तपाईंको खर्च अत्यधिक हुनेछ र तपाईंले आफ्नो वित्तीय अवस्था नराम्रो भइरहेको छ भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ। अर्कोतिर तपाईंको स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू आई पर्नेछन्। तर तपाईंले विदेशी सम्बन्ध बनाएर तिनीहरूबाट फाइदा लिनु हुनेछ जसले तपाईंको आयमा वृद्धि हुनेछ। वैदिक ज्योतिष 2018 को भविष्यवाणीले तपाईंमा आध्यात्मिक झुकावको विकास हुनेछ र केही समय भौतिक दुनियाबाट पृथक महसुस गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने बताइएको छ। कार्यस्थलमा तपाईं अधिकारमा रहनु हुनेछ, तर कुनै पनि विवादबाट टाढा रहनुहोला। तपाईंको प्रोफाइल र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ र तपाईंको हातमा एउटा नयाँ जिम्मेवारी वा महत्त्वपूर्ण परियोजना आउन सक्छ। विद्यार्थीहरूलाई राम्रो हुनेछ र उनीहरू शिक्षा र नयाँ कुरा सिक्नेतिर अझ इच्छुक हुनेछन्। आफुभन्दा ठूलासंग राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नुहोस् जसले गर्दा तिनीहरूले विशेष गरी मार्च र मे महिना भित्र तपाईंको लागि सहयोग गर्न सक्छन्। गृहस्थ जीवनमा फलिफाप हुनेछ र सहचर्यको बन्धनले थप बल पाउन सक्छ। वैवाहिक जीवनमा केही गलतफहमीहरू आउन सक्छन् जसलाई तपाईंले रोक्नु पर्नेछ। अक्टोबर पछि तपाईंको विवाहित जीवनमा पनि सुधार आउनेछ र तपाईंले असल व्यक्तिगत जीवनको आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ। समग्रमा भन्नु हो भने, यो वर्ष तपाईंले आफ्नो जीवनमा उत्कृष्टता कायम राख्दै कमजोरीहरूलाई सुधार गर्न सक्नुहुनेछ।
2018 को राशिफलले यो कुम्भ राशिको वर्ष हो भनेर भविष्यवाणी गरेको छ। तपाईंको निर्णयले यो वर्ष तपाईंका जीवनमा विकासको जग राख्नेछ। तपाईंको मुख्य ध्यान यस वर्ष तपाईंले राम्रो लाभ प्राप्त गर्नको लागि हुनेछ र आफ्नो कठिन प्रयासको कारण तपाईले आफ्नो आर्थिक स्थिति पनि बढाउन सक्षम हुनु हुनेछ र धन वृद्धि गर्नुहुनेछ। लामो यात्रामा पनि जान सक्नुहुन्छ। तपाईंले विद्वतापूर्ण र फलदायी निर्णय लिनु हुनेछ। तपाईंको स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ र तपाईंले कुनै पनि विगतका रोगबाट छुटकारा प्राप्त गर्नु हुनेछ। वरिष्ठहरूले तपाईंको कदर गर्नेछन्। तपाईं सद्गुणी कामकुरामा संलग्न हुनुहुनेछ। वैवाहिक जीवनमा प्रेम र स्नेहको सार रहनेछ। तर, शुरूका दुई महिनाहरू केही चुनौतीपूर्ण हुनेछन्, किनकि त्यो समयमा तपाईंका जोडीमा केही समस्या वा स्वास्थ्य समस्याहरू आउन सक्छन्। प्रेम सम्बन्धमा रहनेहरूले यो वर्ष सम्बन्धमा बढी ध्यान दिनु पर्नेछ र धेरै राम्रो तरिकाले एकअर्कालाई बुझ्नु आवश्यक छ। विद्यार्थीले कडा परिश्रम गर्नेछन् र बच्चाहरुले केही झर्किनुको सामना गर्नेछन्, तर, तपाईंको प्रेम र हेरचाहले तिनीहरूलाई फलिफाप गर्नेछ। समग्रमा भन्नु हो भने तपाईंको लागि यो वर्ष सकारात्मक र प्रगतिशील वर्ष हो।
2018 को राशिफल अनुसार, मीन राशिका संवेदनशील मानिसहरूले वर्षैभरि आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नु आवश्यक छ; विशेष गरी अक्टोबरसम्म, त्यसपछि तिनीहरू जीवनको सही आनन्द उठाउन सक्षम हुनेछन्। बढी तनाव र कर्मपिशाची प्रकृतिले तपाईंलाई कष्ट दिन सक्छ। काम गर्ने ठाउँमा, तपाईंलाई इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नको लागि अतिरिक्त प्रयास गर्ने कुरामा विश्वास राख्नु जरूरी छ। वरिष्ठहरूलाई काममा धेरै ध्यान राख्ने हुनाले तपाईंले एकै समयमा सबै कुराहरूसंग सामना गर्नु आवश्यक छ। जनवरी महिना वित्तीय पक्षको लागि एकदमै चुनौतीपूर्ण अवधि हुन सक्छ; कुनै पनि ठूलो सम्झौता फेब्रुअरीको लागि स्थगित गर्नुहोस्; त्यसपछि तपाईंको आयमा राम्रो वृद्धि हुनेछ। कुनै नचाहिएका ठाउँको यात्रा गर्नु पर्ने हुन सक्छ। वैवाहिक जीवन सारपूर्ण हुनेछ र तपाईंको जोडीले आफ्नो क्षमता अनुसार उचित सहयोग गरेर तपाईंलाई मद्दत गर्ने प्रयास गर्नेछन्। तपाईँले व्यावसायिक दायित्वको कारण आफ्नो हालको निवास परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। बच्चाहरु बदमास हुनेछन् र तपाईंले तिनीहरूलाई राम्रोसंग राख्नको लागि धेरै प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरूले अध्ययनमा छोटो बाटो लिनेछन् र उदास रहनेछन्। तपाईं पनि जीवनमा छिटा बाटाहरूमा हिंड्नुहुनेछ र त्यसले तपाईंलाई राम्रो परिणाम पनि दिन सक्छ, तर तपाईँ तिनीहरूलाई रोक्नु आवश्यक पर्नेछ। अक्टोबर पछि, तपाईंले जीवनमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन देख्न पाउनु हुनेछ। समग्रमा भन्नु हो भने, यस वर्ष तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ र जीवनको सबै क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ।
यसरी, यो नै तपाईको लागि हामीसंग भएको वर्ष 2018 को राशिफल हो। यिनै निःशुल्क भविष्यवाणीहरूको उचित उपयोग गरेर यस वर्षलाई अझै बढी फलदायी बनाउनुहोला।